‘कृषि प्रोजेक्ट ल्याउनुस्, कर्जा लैजानुस्’ (कृषि विकास बैंकका सीईओ सिटौलासँगको अन्तरवार्ता) – Banking Khabar
‘कृषि प्रोजेक्ट ल्याउनुस्, कर्जा लैजानुस्’ (कृषि विकास बैंकका सीईओ सिटौलासँगको अन्तरवार्ता)
वाणिज्य शास्त्रमा स्नाकोत्तर गरेका कृषि विकास बैंक लि.का बर्तमान सीईओ लिला प्रकाश सिटौला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । करिब २५ वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरी अवकास लिएपछि सिटौला ०७१ सालदेखि कृषि विकास बैंकमा सीइओको रुपमा कार्यरत छन् । सिटौला कृषि विकास बैंकमा प्रवेश गरेपछि उनले बैंकलाई निकै कुशलतापूर्वक अघि बढाइरहेका छन् । बैंकले उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग लगायतका सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने क्षेत्रमा राम्रो लगानी गरेको छ भने राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चुक्ता पुँजी पनि पुर्याउँदैछ । यसैसन्दर्भमा कृषि विकास बैंकका सीईओ सिटौलासँग बैकिङ खबर डटकमका संवाददाता नारदमुनी सिग्देलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
कृषि विकास बैंकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
कृषि विकास बैंक नेपालमा सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित छ । यो विगतमा कृषि क्षेत्रको विकासको निमित्त आवश्यक वित्तीय एवं प्राविधिक सेवा उपलव्ध गराउंदै ग्रामिण कृषिलाई व्यवसायिकरणको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले विकास बैंकको रुपमा स्थापना भएको बैकिङ्ग संस्था हो । यो बैंक धेरै समय सामान्य किसानको लागि मात्र काम गर्ने भनि परिचित थियो । यद्यपी यसले देशका सबैजसो क्षेत्रमा सेवा भने प्रदान गरिरहेको थियो । वि.स. २०६२ साल देखि यस बैंकलाई वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित गरियो । त्यसपछि मात्र कृषि विकास बैंक लिमिटेडले धेरै कठिनाईका बाबजुत पूर्णरुपमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गर्न थालेको हो ।
बैंकलाई वित्तीय रुपमा सवल ढंगबाट स्थापित गर्दै आधुनिक वाणिज्य बैंकबाट सम्पादन हुने सवै प्रकारका व्यवसायिक गतिविधिहरु संचालन गर्न सक्ने बैंकको रुपमा अघि बढाउन सबै प्रकारका प्रयासहरु भईरहेका छन् । समग्रमा यो बैंक अहिले नेटवर्क, ग्राहक, संस्था र पुँजीको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकको रुपमा स्थापित भईसकेको छ । बैंकले अधिराज्यभरी नै आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ ।
समग्रमा बैकको व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारहरु निर्माण भएका छन् । हामीले आधुनिक प्रविधि सहित बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छौँ ।, मानव संसाधनका सम्पुर्ण समस्या हल गरेका छौं । हामीले लोकसेवा आयोगको सहभागितामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई अबलम्बन गरि सकेका छौँ । यो बैंकमा करिब ३ सय कर्मचारी लोकसेवाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संचालित परीक्षा प्राणालीबाट प्रवेश भएका छन् भने थप १५० जना भर्ना हुने प्रकृयामा छन् । जनशक्तिको अपरीहार्य व्यवस्थापनको माध्यमबाट नै उच्च उत्पादकत्व हाँसील गर्न सकिन्छ भन्नेमा वर्तमान व्यवस्थापन विश्वस्त छ । मानव संसाधनलाई व्यवस्थित परिचालनको माध्यबाट कसरी उच्च उत्पादकत्व हाँसील गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ वर्तमान व्यवस्थापन लागि परेको छ ।
कृषि विकास बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
हामीले जनशक्ति, प्रविधि र कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै आन्तरिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाईसकेका छौँ । हामीले केन्द्रीय बैंकले दिएका अधिकांश निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ । बैंकमा सबैभन्दा ठूलो हिसाब मिलानको समस्या थियो । यो कामलाई पनि धेरै हद सम्म व्यवस्थित गरका छौँ ।
अहिले यो बैंक सबैभन्दा मजबुत बैंकको रुपमा स्थापित भएको छ । करिब १३ प्रतिशतमा सिमित रहेको हाम्रो पुँजीको पर्याप्ततालाई अहिले १८ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएका छौँ । हामीले उत्कृष्ट रिजर्भ निर्माण गरेका छौँ । नाफा उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ यो वर्षको आम्दानी स्थितिलाई हेर्दा करिब १ अर्व त सरकारलाई कर तिर्ने अवस्थामा पुगेको छौँ । गतवर्ष ३ अर्ब ४ करोड हाम्रो लक्षित नाफा थियो तर निर्धारण गरेभन्दा पनि बढी ३ अर्व ८४ करोड जती नाफा पुग्ने देखिन्छ । जसले गर्दा हाम्रा सेयर सदस्यलाई पनि सन्तुष्टि बनाउन हामी सफल हुनेछौँ । हाम्रो अहिले प्रति सेयर आम्दानी ३८ रुपैयाँ पुगेको छ । यो अन्य वाणिज्य बैंकको तुलना अब्बल मान्नुपर्छ ।
कुल कर्जा लगानीसहितका अन्य सूचकहरु कस्ता छन् ?
कृषि विकास बैंकको ८६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कुल कर्जा लगानी छ । यस बैंकको ८४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । केन्द्रीय बैंकले ताकेको सीमाभित्र नै सि डी अनुपात र तरलता अनुपात कायम गर्न बैंक सक्षम रहेको छ । यसै गरी दुई वर्ष अघि ६.३५ प्रतिशतमा रहेको निष्कृय कर्जा अहिले ३.६६ प्रतिशतमा झार्न बैंक सफल भएको छ । यो निकै उत्साहजनक परिणाम हो । २ सय ५० बैंकिङ शाखा सञ्चालित शाखाहरु मध्ये सिवीएस्मा आवद्ध १ सय ६९ शाखा छन् भने बाँकी कार्यालयहरुलाई सिवीएस्मा जोड्ने कार्य तिव्रताका साथ अघि बढाइएको छ । हाम्रा अझै पनि केहि शाखाहरुले पूर्ण रुपमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार गरेका छैनन् । त्यस्ता शाखाहरुलाई वाणिज्य बैंकिङमा परिवर्तन गर्ने कार्य पनि दुई आ.व.मा पूर्णता दिईने छ । हाल एटिएम सेवा २१ वटा संचालनमा रहेको र २० जडान हुने क्रममा रहेका छन् । हाम्रा करिव ९ लाख ७१ हजार ग्राहक रहेका छन् भने ग्राहकहरुको सेवाका लागि २७६१ जना कर्मचारीहरु हाल कार्यरत रहेका छन ।
कृषि विकास बैंकको हालको चुक्ता पुँजी र चुक्ता पुँजी बढाउने योजना कस्तो छ ?
हकप्रद सेयर जारी भईसकेकोले अब बैंकको चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख १२ हजार मध्ये साधरण जारी पुँजी रु.५ अर्ब ९० करोड ६४ लाख र अग्राधिकार जारी पुँजी (ननक्युमिलेटीभ इरिडिमेवल प्रिफिरेन्स सेयर) रु.५ अर्ब ४३ करोड २७ लाख १२ हजार हुने कुरा तपाईको संचार माध्यमबाट जानकारी गराउन चाहन्छु ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले पुर्याउनु पर्ने चुक्ता पुँजी रु ८ अर्व का लागि यस बैंकले उपलव्ध गराई सकेको १५ प्रतिशत बोनस सेयर तत्पश्चात कायम हुने सेयर संख्यामा ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरिसकेकोले अब चुक्ता पूँजी रु.५ अर्ब ९० करोड ६४ लाख हुनेछ । बाँकी नपुग चुक्ता पुँजीको हकमा बोनस सेयर जारी गरि तोकिएको समय भित्रै चुक्ता पूँजी ८ अर्व पुर्याउने योजना रहेको विषय पनि तपाईको संचार माध्यमबाट जानकारी गराउंन चाहन्छु ।
नामका कारण पनि कृषि विकास बैंक कृषिमै मात्र लगानी गर्ने हो कि भन्ने पनि कतिपयलाई पर्न सक्छ, अन्य कुन–कुन क्षेत्रमा यो बैंकको लगानी छ ?
यो बैंकले कृषिको अलवा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसले कृषिमा लगानी गर्दै उद्योग, जलविद्युत् तथा उर्जा, पर्यटनलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेको छ । यसका ग्राहक, किसान तथा सबै किसिमका उद्योगीहरु र साना किसानदेखि ठूला व्यापारीसम्म छन् । यसले कृषिदेखि आधुनिक बैंकिङ क्षेत्रले गर्ने सबैखालका काम गरेको छ । मुलतः कृषि विकास बैंक लि. कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकरणको माध्यबाट मुलुकको कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण हिस्सेदार मात्र नभै आर्थिक विकासको सबै क्षेत्रमा वित्तीय साधनको कुशल परिचालनको माध्यमबाट भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्र र विपन्न वर्गमा यस बैंकको लगानी कति छ ?
हामीले लगभग सबै लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नै गरेका छौँ । विपन्न वर्गमा राष्ट्र बैंकले भनेको भन्दा धेरै लगानी अर्थात १० प्रतिशत लगानी पुर्याएका छौँ । राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत उत्पादनशील कर्जा भनेको छ । तर हामीले त कृषि क्षेत्रमा मात्रै ३३ प्रतिशत लगानी गरेका छाँै । समग्रमा हामीले उत्पादनशील क्षेत्रमा झण्डै ७५ प्रतिशत लगानी गरेको विषय तत्याङ्कले पुष्टि गर्दछ ।
कृषि विकास बैंकको भावी रणनीति के छन् त ?
कृषि विकास बैंकको भविष्यका योजना भनेको छोटो समयमा यो बैंकलाई सबै भन्दा उत्कृष्ट बैंकको रुपमा स्थापित गराउने नै हो । प्रविधिको क्षेत्रमा, निक्षेप संकलनमा, गुणस्तरीय कर्जा प्रदान गर्ने विषयमा र कृषि विकास बैंकलाई प्रत्येक नेपालीको घर–घरमा पुर्याउने विषयमा हामी गम्भिरताका साथ अघि बढेका छौँ । यसका लागि हामी सबै प्रकारका प्रयासहरु अघि बढाउनेछौँ ।
एउटा सामान्य कृषकले यो बैंकबाट कस्तो सेवा प्राप्त गर्न सक्छ ?
बैंक भनेको वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने संस्था हो । सवै प्रकारका किसानलाई हामी केबल कर्जा प्रवाह मात्र गर्दैनौ कृषकको सीप विकासको निमित्त बैंकले निरन्तर तालिम दिने गर्छ । हामीले ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुलाई वित्तीय साक्षरताका माध्यमबाट बैंकसंग जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ । विगतदेखि साना किसानलाई गर्दै आएको सेवा अझै विस्तार गर्दै जाने योजनामा छौँ ।
विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था च्याउसरी उम्रिए, तर ग्रामिण क्षेत्रमा अझै बैंकको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । तपाईहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ बढी विस्तार गर्न के कस्ता चुनौती छन् जस्तो लाग्छ ?
यो बैंक प्रारम्भमा विकास बैंकको अवधारणाबाट स्थापित भएपनि हाल वाणिज्य बैंकको रुपमा काम गरिरहेको ह्ुनाले यसले वाणिज्य बैंक वा एक दिगो एवं सक्षम वित्तीय संस्थाको रुपमा विकसित हुने अवधारणाका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । एकातर्फ एउटा ठूलो वाणिज्य बैंकको नाताले केन्द्रीय बैंक लगायतका नियमनकारी निकायका सम्पूर्ण निर्देशनहरुको परिपालना तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङका असल अभ्यासहरुको कार्यान्वयन गर्दै सम्बद्ध सवै पक्षहरु खास गरी ग्राहक एवं हिस्सेदारहरुलाई अपेक्षित लाभ प्रदान गर्नु एउटा महत्वपूर्ण चुनौती बैंक सामु छँदैछ भने अर्को तर्फ सरकारी स्वामित्व समेत भएको बैंकको नाताले सरकारका कल्याणकारी कार्यक्रमलाई साथै लिएर जानु पनि बैंकको कर्तव्य रहेको छ । यस परिपृक्षमा सेवाको गुणस्तर बढाउने र लागत कम गर्ने लगायतका चुनौतीहरु बैंक सामु छन् । जनताको गुणस्तरयूक्त सेवा प्राप्त गर्ने र सेयरहोल्डरको स्वामित्वको संरक्षण एवं प्रर्बद्धन तथा नियमनहरुको पूर्ण परिपालनाको माध्यमबाट र राष्ट्र बैंकले विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुनै हाम्रो चुनौती हो । बैंकलाई सदृढ, स्वस्थ र सक्षम बनाउने हाम्रो एक मात्र लक्ष्य भएको हुँदा यस दिसातर्फ हामी निरन्तर अघि बढ्ने छौँ ।
कृषिमा व्यावसायिकता प्रदान गर्नका लागि किसानलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकता प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि कृषकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न र आएका प्रोजेक्टमा सिधै लगानी गर्न कृषि विकास बैंक सँधै तयार छ । प्रत्येक किसानलाई सिधै बैंकमा आउन र आफुलाई चाहिएको सेवाको बारेमा सोझै सम्र्पक गरेमा बैंकले सवै प्रकारको सेवा प्रवाह गर्न तयार रहने छ ।
किसानलाई बैंकसँग प्रत्यक्ष जोड्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सबै कामको लागि केन्द्रीय कार्यालय धाउन नपरोस भनेर हामीले देशैभरीको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर बैंकका शाखा विस्तार गरेका छौँ । यसको महत्वपूर्ण काम ग्राहकसँग जोडिनु हो । हामीले सबै शाखामा हेल्पडेक्स राखेका छौँ । र यसलाई अनुगमन गरेर निरन्तरता पनि दिनेछौँ । वित्तीय साक्षरताका माध्यबाट बैंक र प्रत्येक नेपाली कुनै न कुनै रुपमा जोडिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अभियान जारी छ ।